A na-etinye kuki eji peeji ndị dị na Law & More weebụsaịtị
Kuki bụ obere faịlụ ederede dị mfe edobere na kọmputa gị, ekwentị ma ọ bụ mbadamba ihe mgbe ị gara na websaịtị Law & More. A na-etinye kuki eji peeji ndị dị na Law & More weebụsaịtị. Enwere ike izighachiri ozi banyere echekwa n'ime ya na mgbe ọ mechara gaa na weebụsaịtị. Nke a na-enyere weebụsaịtị aka ịmata gị, dị ka a pụrụ isi kwuo ya, n'oge nleta ọzọ. Ọrụ kachasị mkpa nke kuki bụ ịmata ọdịiche ndị ọbịa na ibe. Ya mere, a na-ejikarị kuki na ebe nrụọrụ weebụ ị kwesịrị ịbanye. Dịka ọmụmaatụ, kuki na-eme ka ị jide n'aka na ị ga-abanye mgbe ị na-eji weebụsaịtị. You nwere ike jụ iji kuki n'oge ọ bụla, n'agbanyeghị na nke a nwere ike belata arụmọrụ yana ịdị mfe nke iji weebụsaịtị.
Law & More na-eji kuki arụ ọrụ. Ndị a bụ kuki a na-edowe ma tinye ya na ntanetị onwe ya. Achọrọ kuki ndị na-arụ ọrụ iji hụ na saịtị weebụ ahụ na-arụ ọrụ nke ọma. Ana-edobe kuki ndị a mgbe ụfọdụ, agaghị ehichapụ ya ma ọ bụrụ na ị kpebie ịnabata kuki. Kuki arụ ọrụ anaghị echekwa data nke onwe ya, enweghịkwa ozi ọ bụla ị nwere ike isi na ya. Iji ọmụmaatụ arụ ọrụ ka iji kuo map ala maka Google Maps na weebụsaịtị. Achọghị ozi a dịka o kwere omume. Ọzọkwa, Law & More egosila na anyị anaghị eso Google ekerịta ozi ahụ yana Google nwere ike ghara iji data ha nwetara site na weebụsaịtị maka ebumnuche ha.
Law & More na-eji kuki sitere na Google Analytics iji nyochaa omume nke ndị ọrụ yana usoro izugbe na iji nweta mkpesa. N'ime usoro a, a na-edozi data nke ndị ọbịa na saịtị ahụ site na iji kuki nyocha. Kuki nyocha Law & More tụọ okporo ụzọ na weebụsaịtị. Ndekọ ọnụ ọgụgụ ndị a na-ahụ na Law & More na-aghọta oge ole a na-eji webụsaịtị ahụ, ozi ndị ọbịa na-achọ, na peeji ndị dị na weebụsaịtị a na-elekarị anya. N'ihi ya, Law & More maara akụkụ nke weebụsaịtị a ma ama na ọrụ ndị ọ dị mkpa ka emeziwanye. A na-enyocha okporo ụzọ dị na weebụsaịtị iji meziwanye weebụsaịtị ma mee ka ahụmịhe nke ndị ọbịa nke weebụsaịtị wee nwee ọ asụ. Onu ogugu onu nke anakọtara anabataghi ndi mmadu ma anaghi eche ya dika o kwere omume. Site n'iji Law & More Weebụsaịtị, ị kwenyere na nhazi nke data nke onwe gị site n'aka Google maka ebumnuche ndị akọwapụtara. Google nwere ike ịnye ndị ọzọ ozi a ma ọ bụrụ na iwu nyere Google ịme nke ahụ ma ọ bụ nwee dịka ndị ọzọ na-ahazi ozi n'aha Google.
Kuki maka ijikọ mgbasa ozi mmekọrịta
Law & More na-ejikwa kuki iji mee ka njikọta mgbasa ozi na-elekọta mmadụ. Weebụsaịtị ahụ nwere njikọ nke netwọkụ mmekọrịta Facebook, Instagram, Twitter na LinkedIn. Njikọ ndị a na-eme ka o kwe omume ịkekọrịta ma ọ bụ kwalite ibe na netwọk ndị ahụ. A na-ebunye koodu nke achọrọ iji mezuo njikọ ndị a site n'aka Facebook, Instagram, Twitter na LinkedIn onwe ha. N'ime ndị ọzọ, Koodu ndị a na-etinye kuki. Nke a na - eme ka ndị mmadụ na - elekọta mmadụ nwee ike ịmata gị mgbe ịbanye na netwọkụ mmekọrịta. Ọzọkwa, a na-anakọta ozi gbasara ibe ndị ị na-ekekọta. Law & More enweghị mmetụta na ịtụkwasị na ojiji nke kuki nke ndị ọzọ ahụ. Maka ozi ndị ọzọ gbasara data nke netwọọdụ mgbasa ozi na-elekọta mmadụ jikọtara. Law & More na-ezo aka na nkwupụta nzuzo nke Facebook, Instagram, Twitter na LinkedIn.
Ehichapu nke kuki
Ọ bụrụ na ịchọghị Law & More iji chekwaa kuki site na weebụsaịtị, ị nwere ike gbanyụọ nnabata nke kuki n'ihe nchọgharị gị. Nke a na - echekwa na anaghị echekwa kuki. Agbanyeghị, na-enweghị kuki, ụfọdụ ọrụ nke weebụsaịtị nwere ike ọ gaghị arụ ọrụ nke ọma ma ọ bụ na ọ gaghị arụ ọrụ ma ọlị. Ebe ọ bụ na echekwara kuki na kọmputa gị, ị nwere ike ihichapụ ya naanị gị. Iji mee nke a, ịkwesịrị ịgụta akwụkwọ ntuziaka nyocha gị.